Wararka Ciyaaraha HNN – Page 3 – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home»Archives»Wararka Ciyaaraha HNN (Page 3)
7-macalin oo sharaxan inay Maurizio Sarri shaqada Chelsea ka badalan inta lagu maqan yahay kulamada xulalka
Talaado, Maarso, 19, 2019 (HNN)- Maamulka kooxda Chelsea ayaa isla garteen in macalin Maurizio Sarri shaqada kooxda laga racadeeyo inta lagu maqan yahay kulamada xulalka aduunka cayaarayaan todobaadkan maal maha ka harsan iyo todobaadka dambe. The Express ayaa ogaatay in dhaq dhaqaaq xoogan uu ka socdo gudaha garoonka Stamford Bridge sidoo kalena ay u badan tahay […]
Talaado, Maarso, 19, 2019 (HNN)- Liverpool ayaa quus ka taagan helitaanka Timo Werner madaama Bayern Munich hormar ka sameeneyso sidii ay weeraryahankan xagaagan RB Leipzig kaga soo qaadan laheyd. Zlatan Ibrahimovic ayaa sheegay in Paul Pogba noqon karo laacibka khadka dhexe caalamka ugu wanaagsan madaama uu siweyn u hormariyay kubadiisa dhanka dhalinta goolasha, caawinta, raacashada iyo kartida hogaaminta kooxda. Maamulka Chelsea ayaa […]
By admin on 15/03/2019 Wararka Ciyaaraha HNN
Jimco, Marso, 15, 2019 (HNN)- Kooxda Arsenal oo sameesay soo laabasho cajiib kaddib markii ay garoonkooda 3-0 kaga adkaadeen kooxda Rennes wadarta goolasha ee labada kulan ayaana ah (4-3) Arsenal ayana xaqiiqsatay booskeeda wareega xiga ee sideed dhamaadka . Kooxda Arsenal ayaa ku soo gashay dar dar xoogan qeebtii koowaad ee ciyaarta waxa ayna la yimaadeen […]
Jimco, Marso, 15, 2019 (HNN)- kooxda Chelsea ayaa ku du durisay kooxda Dynamo Kyive kualn ka tirsanaa lugta labaad ee wareega 16-ka ee tartanla Europe League , kulan ciyaareedka ayaana ku soo dhamaaday ( 5-0 ) balse marka loo eego wadarta labada kualn natiijada ciyaarta waxa ay noqoneysaa . ( 8-0 ) Qeebtii koowaad ee kulan […]
By admin on 14/03/2019 Wararka Ciyaaraha HNN
Khamiis, Marso, 14, 2019 (HNN)- kooxda Liverpool oo daaqada ka saartay kooxda Bayer kaddib markii ay kaga adkaadeen 3-1. Qeebtii koowaad ee kulan ciyaareedka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan , ciyaartoyda labada dhinac ayaana soo bandhigay ciyaar aad u qurux badan walow bara baro 1-1 lagu kala nastay . Kooxda Liverpool oo marti […]
Khamiis, Marso, 14, 2019 (HNN)- Kooxda Chelsea oo guul muhiim ah ku soo gaartay garoonkeeda lugtii koowaad ee wareega 16-ka ee tartanka Europe League ayaa markan caawa kula ciyaari doonta kooxda Dynamo Kyiv garoonkooda kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka . Kooxda Bules ayaa guul 3-0 ku soo xaaqday Dynamo Kyiv lugtii hore wax ayna […]
By admin on 13/03/2019 Wararka Ciyaaraha HNN
Arbaco, Marso, 13, 2019 (HNN)- Kooxda Juventus ayaa dhigeeda Atletico Madrid ka gaartay guul soo laabashao ah kaddib markii ay uga adkaadeen 3-0 , wadarta goolasha ee labada kulan ayaana ah (3-2) Qeebtii koowaad ee ciyaarta kooxda Juventus ayaa ku bilaabatay dar dar xoogan xili taageerayaasha kooxdooda ay sawaxan iyo qeylo dhaan ay ku garab taagnaayeen […]
HORDHAC: Juventus VS Atletico Madrid
By admin on 12/03/2019 Wararka Ciyaaraha HNN
Talaado, Marso, 12, 2019 (HNN)- kooxda Juventus oo heysata rajo aad u yar oo ah in ay u soo baxaan Champions League ayaa markan garoonkooda ku marti qaadaya kooxda Atletico Madrid lugta labaad ee wareega 16-ka ee tartanka Champions League . Juventus waxaa waajib ku noqon doonta in ay goolal la timaado misane shabqeeda ay ilaashato […]
Kooxaha Ajax & Tottenham Oo Siddeed Dhamaadka UCL U Soo Baxay
By admin on 06/03/2019 Wararka Ciyaaraha HNN
Arbaco, Marso, 06, 2019 (HNN)- Kooxda Ajax ayaa Real Madrid ceeb wayn ku soo baday Santiago Bernabeu kadib markii ay 4-1 ku soo xasuuqday isla markaana ay Ajax iska xaadirsay siddeed dhamaadka tartanka UEFA Champions League. Real Madrid ayaa guuldaro taariikhi ah kala kulantay Ajax kadib muddo 22 sanadood ah oo ay garoonkeeda guuldaro kaga […]
HORDHAC: Dortmund VS Tottenham
By admin on 05/03/2019 Wararka Ciyaaraha HNN
Talaado, Marso, 05, 2019 (HNN)- kooxda Dortmund ayaa garoonkeeda ku soo dhaween doonta kooxda Tottenham kulan ka tirsaan lugta labaad ee wareega 16-ka . Tottenham ayaa soo adkaatay kulankii lugtii koowaad waxa ayna ku soo adkaadeen tiro 3-0 . Dortmund waxaa qasab ku ah in ay guul la timaado balse waxaa dhib u keeni kara in […]